[10 / 10 / 2019] မတူညီသောလိုင်းများမှ Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်	41 Kocaeli
Homeလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance & ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (ANKARAY နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမီထရိုဘူတာစက်လှေကားမှာတည်ရှိပါတယ်, မသန်စွမ်းလူသွားစင်္ကြရွှေ့နှင့်ဓာတ်လှေကား၏ဝန်)
26 / 06 / 2014 Levent Ozen လေလံပွဲ, အထွေထွေ, SERVICES လေလံ, ခေါင်းစီးသတင်း, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ 0
ANKARAY နှင့်ဓာတ်လှေကား၏လူသွားစင်္ကြ Moving Metro အိမ်ခြံမြေစခန်းများ, မသန်စွမ်းနှင့် Load အတွက်စက်လှေကားတွေ့ရှိခဲ့န်ဆောင်မှုများ (Band) ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 56969
Metro ဘူတာစက်လှေကား, Elevators နှင့် Moving မသန်စွမ်း၏လူသွားစင်္ကြနှင့် Load (Band) ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘသည်တည်ရှိသော 510 ကို item (4 အစိတ်အပိုင်း) ANKARAY နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ခ) Place: Metro ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် ANKARAY စီးပွားရေး Depot နှင့်စခန်းများတူရကီ
ဂ) Duration: နေ့စွဲ 01.10.2014, 31.12.2016 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
က) Place: ရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန Mah ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်52 Block ။ ခေါက်
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 04.08.2014 - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံသယ Ankaray ဘူတာအောင်အတွက်တူရကီက Metro နှင့်တွေ့ရှိခဲ့စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားစီမံကိန်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 17 / 10 / 2012 စက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကားစီမံကိန်းများမွေး SERVICES ရထားစနစ်များဦးစီးဌာန Egon အထွေထွေညွှန်ကြားမှု BE မည်ဖြစ်သည့်တူရကီက Metro နှင့် Ankaray နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် 4734 ဆောင်းပါး၏,fအပိုဒ်အရသိရသည်န်ဆောင်မှုများ၏ဘူတာချမှတ်ခြင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအတွက်ညှိနှိုင်း၏ 21 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကား Project မှတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 150324 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 Yenimahalle Yenimahalle / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail က လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.tr ​​...
နူးညံ့သော applications များအဝေးပြေး၏ Pre-ရွေးချယ်ရေး expropriation စုဆောင်းခဲ့ကြ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ankaray နှင့်တူရကီက Metro အိမ်ခြံမြေကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (173) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)